Faraska Cartuusiyaanka, oo kamid ah faracii reer Andalusiya | Fardaha Noti
Faraska Cartujano, oo sidoo kale loo yaqaan «Cerrado en Bocao», wuxuu helayaa magacan maxaa yeelay bilaabay inuu kiciyo wadaadada Carthusian ee Santa María de la Defensión (Jerez de la Frontera), qiyaastii 1484. Beeraha suufiyadu waxay ahaayeen in ka badan saddex qarni mid ka mid ah kuwa ugu qadarinta badan iyada oo ay ugu wacan tahay raaxadeeda socodka, xarrago, sharaf iyo shaabad. Waxay ku sii fidaysay meelaha calaamadaha ugu badan ee waqtigaas, sida Iskuulka Versailles oo leh Louis XVI. Intaa waxaa dheer, waxay ahaayeen kuwa ay doorbideen boqorada, boqorrada iyo qunsuliyadaha.
Tartanka Carthusian waa a nasab ahaan Faraska Isbaanishka Saafi ah (PRE), oo sidoo kale loo yaqaan Faraska Andalus. Isbarbardhigyadani waxay ka dhigan yihiin keyd hidde ah oo qiimo weyn ugu fadhiya PRE Si kastaba ha noqotee, maahan oo keliya u istaag inaad haysato hiddo-wadayaal aad u saafi ah maaddaama oo keliya tusaalooyinka qoyskan ay soo dhexgalaan (haddaba magaca "xiran"), laakiin sidoo kale, qaab dhismeedkooda kala duwanaanshaha waa la qadarinayaa. Waa nooc quruxsan dabeecad ahaan sidaan ku ogaan doonno maqaalkan.
Ma si fiican ayaynu u naqaan?
Si loo fahmo Faraska Carthusian-ka, waa inaan marka hore tirinnaa xididdada Faraska Andalus. Nooca Daahsoon ee Dhiigga Isbaanishka waa natiijada baaritaanka dhammaystirka bilicsanaanta iyo haybadda.
Dhaqanka Isbaanishka dhexdiisa, asalka faraska iyo saamayntiisa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo la kobcayo ilbaxnimooyinkii ugu horreeyay ee Jasiiradda Iberia. Aynu eegno tusaalooyinka qaarkood: reer Carthaginians waxay ku darsadeen ciidammadooda fardo fara badan, iyagoo qiimeynaya xooggooda iyo adkeysigooda. Roomaaniyiintu waxay garanayeen sida loo qaddariyo Faraska Andalusiyaanka loona wanaajiyo labadaba gaadiid ahaan iyo astaan ​​u qalma boqorrada iyo boqorrada. Muhiimadda sinnaanta ayaa ka muuqata markhaatiyo badan oo ay qoreen qorayaasha sida Homer ama Pliny.
Nasiib wanaag astaamihii Faraskii Andalus-ka wax saameyn ah kuma yeelan duullaanadii dadyowgii Jarmalka maadaama ay intabadan lugeeyeen. Intaas waxaa sii dheer, sharci Roman ayaa la soo saaray kaas oo la ilaalinayay in muddo ah, si loo difaaco astaamahan isbaanishka.
Ma doonaysaa Dhamaadkii qarnigii XNUMX-naad, markay ku jirtay Monastery-ka La Cartuja taranka taranka ee Faraska Andalusiya ayaa soo baxay: Faraskii Cartujano. Qiyaastii seddex qarni ayaa suufiyadan Carthusian-ka ah waxay u rogeen beertoodii mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna qadarinta waqtigaas. Laakiin waxaan arki doonaa taariikhda isbarbardhigyadan dambe, aan marka hore ogaanno sida ay yihiin.
1 Sidee tahay
Waa xayawaan ka mid ah weynaansho weyn, kala sooc, dhaqdhaqaaqyo ballaaran oo sarreeya, wax iyaga ka dhiga la doonayo sida iskaraabyada xitaa lo'da aan dhalan fardaha Carthusian.
Iyada oo dhererkoodu ay engegayaan qiyaastii 160 cm, waa isku mid jidh leh, qaab muuqaal leh, oo leh laab qoto dheer iyo murqaha gadaashiisa.
Qoorta waxay leedahay muruq aad u fiican oo u oggolaanaya inuu qaado madaxa yar ee nimcada leh oo kacsan inta lagu jiro fuulista. Dhamaan setku wuxuu ka tarjumayaa a sawir aad u qurux badan iyo bilicsanaanta.
Waa equine taas waxay si ku habboon ula jaanqaadday cimilada badda Dhexe. Waxay leedahay sanka weyn ee u oggolaada inay si fiican ugu neefsato jawiga kulul iyo qoyan ee dabeecadda u leh inta badan aagagga badda Mediterranean. Astaamo kale oo ah la qabsiga cimilada ayaa laga helaa dhogorta. Kuwaas oo u dhigma ah koofiyado cawlan noocyo kala duwan oo miisaanka cawliga ah iyo dhibco madow in ka caawi xayawaanku inaysan ku gubin falaaraha qorraxda iyadoo la kala firdhiyo falaadhaha xiddigga iyadoo aan dhaawac laga gaadhin faraska maqaarkiisa. Marar dhif ah, maqaarka madow ama bunni sidoo kale waa la arki karaa.
Intaa waxaa dheer, waxaan ka helnay xoogaa beero harag ah oo ku yaal woqooyiga Spain. Halkaas Equines-ku waxay la qabsadeen iyagoo noqdey waxoogaa yar oo rustic ah iyada oo la ilaalinayo xarrago lagu tilmaamayo noocyadan. Tusaale wanaagsan ayaa ah midka ka muuqda fiidiyaha hoose:
Sida ay tahay dabeecaddeeda, waxaan wajaheynaa a tartan sharaf leh oo docile ah, oo leh falcelin cadaalad ah Waa mid xoogan oo firfircoon isla markaana isla markaa jilicsan.
Qarnigii XV waxaa jiray hoos u dhac naxdin leh oo ku yimid mareegaha Andalus, inta badan waxaa sabab u ah iibinta gobollada kale ama waddamada kale iyo soo saarida baqalka. Tani waxay keentay Golaha Magaalada Jerez inay soo saaraan amar mamnuucaya in lagu iibiyo marsooyinkan meel ka baxsan aagga ogolaansho la'aan Corregidor. Mar dambe ayaa la mamnuucay in marsooyinkan dameerro lagu daboolo.
Labaatan iyo afar sano ka dib mamnuucyadan, khaniisiintii Carthusian ee Jerez waxay samaysteen beertoodii taas oo aakhirka isu beddeli doonta oo loo yaqaanno «Cartuja» muddo kadib. Waxay sidoo kale noqon lahaayeen naftooda, yaa badbaadin lahaa isirkan inta lagu guda jiro duullaankii Faransiiska adoo guurinaya oo ku qarinaya beer kale.
Taariikhda isleegyadaas waxay ku qasan yihiin halyeeyo. Midkood baa sidaa leh wadaadka Pedro José Zapata, nin xoolo dhaqato ah oo beeraley ah waqtigaas, abbaaraha 1810 xulashadii farcankan fardaha ayaa bilaabmay laga bilaabo iibsashada fardo iyo maareyn ka hor Cartuja de Jerez, halkaas oo fardahaas lagu hayay ilaa dhammaadkii qarnigii XNUMXaad. KU faracii isku mid ahaantooda waxay bilaabeen in loogu yeero "Hierro de Zapata" iyo waqti ka dib waxaa loogu yeeri doonaa si rasmi ah Faras Cartujano ama Cerrados oo ku yaal Bocao.
Tartanku wuxuu bilaabmayaa inuu fido. Dhaxal suge Zapata, 1857, wuxuu ka iibiyey qayb ka mid ah marsooyin iyo fardo Vicente Romero, oo ay abti u tahay inay ka iibin doonto laba dufcadood, mid ka mid ah Curro Chica iyo tan kale Juan Pedro Domecq Dhaxal sugeyaasha dambe waxay ka iibin doonaan Roberto Osborne, kaas oo 1949 ka iibin lahaa inta badan iskudarkiisa Fernando de Terry, inta soo hartayna wuxuu u iibin doonaa Marques de Salvatierra iyo Juan Manuel Urquijo.
Maanta waan xaqiijin karnaa taas dhammaan Fardo Carthusian ah waxay ka yimaadeen saddexdaan lo ': Urquijo, Terry iyo Salvatierra.
Beerahan dhirtu waxay leedahay a Qiime aan la koobi karin oo ka imanaya dhinaca hidda-socodka ee aragtida iyo horumarinta Isbaanishka Saafi ah, tan iyo markii ay sii jirtay wax ka badan shan qarni oo aan lahayn saamayn dibadeed. Intaa waxaa sii dheer, Terry beertiisa haraaga bishii Maarso 1990 wuxuu ka mid noqday dhaxalka. Kadib, Bishii Diseembar ee isla sanadkaas, Yeguada Cartujana del Hierro del Bocado waxaa si rasmi ah loogala wareegay EXPASA, oo ah shirkad ay leedahay Dhaxalka Gobolka Isbayn.
Fardaha Carthusian-ka ee fardaha waa matalaad weyn oo xididdada Spanish Thoroughbred ah. Maxaa intaa ka badan, Waxay wax ka geysatay abuuritaanka iyo hagaajinta xoolo badan oo caan ah oo reer Yurub iyo Mareykan ah oo dhammaantood ka sarreeya.
Maanta, ka Yeguada de La Cartuja waxaa loo tixgelin karaa keydka ugu weyn ee fardaha noocyadan. Qaar ka mid ah laba boqol oo xayawaan ah ayaa halkaa ku daaqaya calamada “Hierro del Bocado” oo uu sameeyay Zapata sanadkii 1810.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » Fardo » Faraska Cartuusiyaanka, oo ka mid ah faracii reer Andalus
Dhaawacyada ugu badan ee dhaca marka aad fuushan tahay faras